Mogadishu Journal » Kalidou Koulibaly ‘Waxaa Loo Balan Qaaday’ Man City - Idman news
Mogadishu Journal » Kalidou Koulibaly ‘Waxaa Loo Balan Qaaday’ Man City
Napoli ayaa la rumeysan yahay inay u balan qaaday Manchester City inay awood u yeelan doonto inay lasoo saxiixato daafaca dhexe Kalidou Koulibaly xagaagaan. Inkasta oo uu haddaba ku daray xiddiga reer Holland ee Nathan Aké oo ka socda Bournemouth, tababaraha City Pep Guardiola ayaa raadinaya daafac kale oo xagaagan ah wuxuuna u arkaa Koulibaly mid ku habboon, iyadoo Napoli la rumeysan yahay inay diyaar u tahay inay ku iibiso qiimaha saxda ah.
Kooxda Napoli ayaa dooneysa inay dib u dhis ku sameyso kooxdeeda, iyadoo horeyba ula heshiisay inay Allan ka iibiso Everton, sida laga soo xigtay Raffaele Auriemma (via Il Napolista), kooxda Serie A ka dhisan ayaa diyaar u ah inay dareenkeeda u weeciso iibinta Koulibaly. Madaxweyne Aurelio De Laurentiis ayaa la sheegayaa inuu Koulibaly u balan qaaday xagaagan kooxda City, iyadoo Guardiola uu qarka u saaran yahay inuu qalinka ku duugo heshiis ku kacaya £ 63m oo ku aadan laacibka reer Senegal. Markii aan intaas iri, France Football ayaa sii wadata inay cadeyso in City aysan weli u gudbin wax dalab ah kooxda Napoli, inkastoo ay heshiis hordhac ah la gaareen 29 jirkaan xagaagan.
Labada kooxood ee City iyo Napoli ayaa u muuqda inay diyaar u yihiin inay heshiiskan ka gudbiyaan khadka tooska ah, laakiin waxay u badan tahay inay hoos u dhacdo haddii City ay dabooli karto dalabyada De Laurentiis, kaasoo lagu yaqaan inuu yahay mid ka mid ah gorgortamayaasha ugu adag. Sida laga soo xigtay wargayska La Gazzetta dello Sport, Koulibaly ayaa ku sii kordhaya jahwareerka De Laurentiis oo aan dabacsanaan ka qabin wadahadalada wuxuuna madaxweynaha ku cadaadinayaa inuu hoos u dhigo qiimaha uu ku dalbanayo, kaasoo taagnaa in ka badan £ 100m ka hor inta aan la xirin.
Tiradaas ayaa ku filneyd inay cabsi galiso kooxaha sida Manchester United, Chelsea iyo Paris Saint-Germain, inkasta oo haddii qiimo dhimis lagu dhiirrigeliyo inay ku soo biiraan tartanka ay tahay in la arko.
Waqtigaan la joogo, City waxay umuuqataa inay tahay meesha ugu macquulsan ee Koulibaly. Guardiola ayaa qalbigiisa ku haya inuu ku daro magac heer sare ah si uu uga caawiyo wax ka qabashada halgankiisa dhanka daafaca ee xilli ciyaareedkii hore, Koulibaly wuxuu ka mid yahay xulashooyin kooban oo runtii la heli karo.
Previous Madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland oo ku soo wajahan magaalada Muqdisho – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Next Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya oo gaaray degmada Balcad – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia